China welded Steel ji kpachie oghere emepụta na suppliers | Xingbei
Bardị Ogwe Bear Mbadamba Ogwe, Ogwe M, Ogwe Oghere, wdg
Iburu Ogwe Nha 20x5mm, 30x3mm, 30x5mm, 40x3mm, 40x5mm, 50x5mm, wdg
Iburu Oghere 30mm, 33mm, 40mm, 50mm ma ọ bụ nha ọzọ
Bardị Ogwe Cross Kpara akpa ígwè mmanya, Ewepụghị mmanya
Ogologo Ogwe osisi 6mm, 8mm ma ọ bụ ndị ọzọ
Ogwe Ogwe Uhie 50mm ma ọ bụ 100mm
Weld .zọ Weld, Nrụgide-akpọchi, Swage Kpọchiri
Ihe mezuwo Nwayọọ Nchara (Q235B), Igwe anaghị agba nchara 304 ma ọ bụ 316, wdg
Ọgwụgwọ Hot tinye kpaliri, paintgba agba ma ọ bụ ndị ọzọ
Grakpụrụ Nkpuchi Nchara
Steel ji kpachie oghere Standard
Materialkpụrụ Ngwá Ahịa
HDG mkpuchi Standard
Elu àgwà ngwaọrụ
Ịgbado ọkụ Kpaliri
A na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụzọ ụkwụ, ikpuchi drainge, mkpuchi mkpuchi, ikpo okwu mmanụ, nzọ ụkwụ na ebe dị iche iche wdg.
Iburu ikike ule Ule ule Nnwale ule
Weld ahụ ewepụghị.
Ngwongwo zinc bu edo.
Ike dị elu na ikike ibu.
Ezigbo ọrụ drainage.
Mfe iji wụnye na ilekọta.
1. Ọtụtụ mgbe, agbakọta na Steel warara.
2. Ngwunye plastic dị na mpụga na na pallet.
3 .Customized.according ka ndị ahịa 'requirment.
Hebei Xingbei Metal Waya ntupu Products Co., Ltd. emi odude ke Anping County, Hebei Province. Anping County bụ obodo nke waya ntupu na ụwa, Anping na-mara dị ka mmepụta na nkesa isi nile di iche iche waya ntupu.
Anyị tumadi na-emepụta ígwè ji kpachie oghere ， ụda mgbochi, ngere wdg Ma na-ere nke ọma n'ụwa nile, na guzosie ike ogologo azụmahịa na ọbụbụenyi.
The ụlọ ọrụ na-ewebata elu na ọkachamara CAD typesetting imewe usoro, adopts mba mmepụta management mode, na ya na ngwaahịa na ọrụ izute ISO9001 mba asambodo ọkọlọtọ, na-ere ọma na mba ahịa, nke a na-ọma natara site ọrụ.
1.Gịnị bụ uru gị?
A: Azụmaahịa zuru oke na ọnụahịa asọmpi na ọrụ ọkachamara na usoro mbupụ.
2. Kedu ka m si kwenye gị?
A: Anyị na-atụle ịkwụwa aka ọtọ dị ka ndụ ụlọ ọrụ anyị, anyị nwere ike ịgwa gị ozi kọntaktị nke ụfọdụ ndị ahịa anyị ka ị lelee kredit anyị. E wezụga nke ahụ, enwere mmesi obi ike sitere na Alibaba, a ga-ekwe gị nkwa na ego gị.
3.Kedụ ka m ga-esi mara otu esi eme usoro m?
A: Anyị ga-enyocha ma nwalee ihe niile iji zere mmebi na akụkụ na-efu tupu mbupu. Ihe nyocha zuru ezu nke usoro a ga-ezitere gị maka nkwenye gị tupu nnyefe.
4.Can ị na-enye akwụkwọ ikike nke ngwaahịa gị?
A: Ee, anyị na-agbatị nkwa afọ ojuju 100% na ihe niile. Biko nweere onwe gị ịzaghachi ozugbo ma ọ bụrụ na ịchọọghị ịdị mma ma ọ bụ ọrụ anyị.
5.Olee ebe ino? Enwere m ike ileta gị?
A: Chọpụta, ịnabata gị gaa na ụlọ ọrụ anyị n'oge ọ bụla.
6.How banyere nnyefe oge?
A: N'ime 15-35 ụbọchị mgbe anyị gosipụtara na ị chọrọ.
7. Kedu ụdị ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ gị na-akwado?
A: T / T, 100% L / C na anya, Cash, Western Union niile anabatara ma ọ bụrụ na ị nwere ụgwọ ọzọ, biko kpọtụrụ m.
Nke gara aga: FRP ji kpachie oghere
Osote: Serrated Steel ji kpachie oghere